UK iyo Faransiiska oo kaluumeysi isku heysto. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub UK iyo Faransiiska oo kaluumeysi isku heysto.
Madaxweynaha Faransiiska: E. Macron.
XIgasho/kilde: AFP VOA
Previous articleHaweenay ka shaqeyso NAV oo loo xukumay inay galmo ahaan uga faa´iideysatay nin qoxooti ah.
Next articleDaawo : Hadii uu corona soo noqdo dowlada sharciyo adag oo cusub masoo rogi doontaa?